Umthandazo weMvana Elulamileyo? Tame, Dominate and Tie [Bayathandwa]
Umthandazo wexhwane elincinci. Ixhwane elincinci yayisisilwanyana esasetyenziswa nguThixo ukucoca izono zehlabathi. Yiyo loo nto i Umthandazo wegusha ethambileyo Sisenzo sokholo esisekelwe kwizibhalo ezingcwele.
Lo mthandazo wenziwa ngeenjongo ezininzi kuxhomekeke kwiimfuno onazo.
Nangona kunjalo, ezona njongo zithandwayo kukoyisa umntu njengoko iMvana iluphawu lokuthobeka.
Imelwe luphawu lwesilwanyana ukuba, ilele kwisisu saso, sibonisa uxolo lokuba yikho.
Xa kuceliwe, kubhekiswa kulo mlinganiswa, ngakumbi ukucela ukuba lo mntu simthandazelayo.
1 Umthandazo wegusha ethambileyo
1.1 Umthandazo wegusha ethambileyo
1.2 Thandaza imvana elambile ukuze ilawule, ilawule kwaye ibambe
1.3 Ukoyisa iintshaba
1.4 Umthandazo wegusha ethambileyo
Nangona imvana ethambileyo imelwe sisilwanyana, lo ngumfanekiso oyingcwele osetyenziswa ngamakholwa ukwalathisa imithandazo yawo.
Ukubhekiswa kwenziwa kwixhwane elingcwele elisebhayibhileni, ngakumbi kwi incwadi yevangeli Ngokuka-St. John, ke ngoko, ayisiyonto ingaqhelekanga kwiimfundiso zobuKristu.
Kubonakala ngathi kukho i-aura engaphezulu kwentloko yakho ufuzisela ubungcwele; uphethe umnqamlezo obonisa idini elenzelwe ukusindiswa koluntu kwaye, ngokufanayo, iflegi emhlophe enokuthi ibonwe ngasemva ivele njengophawu loxolo.
Ngumzobo obonisa ukuzola, uxolo kunye nokululama.
Ndiyakukwenza (igama lomntu ofuna ukumenza) igama likaYesu, uMariya noJosefu.
Ngala magama ndiyakuqinisekisa kwakhona ... ukuze uze kum njengemvana ethobekileyo kwaye uzele luthando kwaye undijongile, sidalwa sikaThixo, ndifuna ukuba ucinge ngam kuphela kwaye uyenze izele luthando.
Ndi ... (igama lakho) ndiyakuqinisekisa, ndoda yam (okanye mfazi).
Egameni lomoya wobukhosi, ndi ... ndilawula izivamvo zakho ezintlanu, isigwebo sakho, ingcinga yakho, kunye nentando yakho: ukuze wena ... uhlale ulawulwa-a, hlala ululamile-ezinyaweni zam kwaye ubotshwe ngokupheleleyo kum, kokubini yangoku njengakwixa elizayo.
Oko xa ndi… ndimbona… (okanye yena) endibona. Xa ndi… ndiva yena… (okanye yena) uyandiva. Xa ndi ... mjonga ... (okanye yena) ujonge kum. Xa ndi ... mchukumisa ... (okanye yena) uyandichukumisa.
Kwaye xa ndi ... ndincwina u ... (okanye yena) uyancwina.
Ke iimvakalelo zakho ezintlanu, ingqondo yakho, imvakalelo kunye nentliziyo, ziya kubotshelelwa kum ngonaphakade kumlo olufanayo. NguThixo endiyifunayo kwaye ndikule meko ndiyifunayo. Amen
Xa itakane elithobekileyo lithandazelwa othandekayo, ukululama kwakhe kuba ngamandla kuba akukho bhetele kunaye ukusinceda silondoloze uxolo oluhlala siluphulukana ngenxa yeemeko esingakwaziyo ukuzilawula.
Ngothando, uninzi lwezi meko zinzima zenzeka.
Lowo uthandayo angahlala baziphathe ngendlela engaqhelekanga y okuba uxolo lwethu lwengqondo. Umthandazo unamandla kwaye kwezi meko sinokuwufumana.
Amandla amabi nawo abaleka kwikhaya apho imvana ihlala ikhona rhoqo kwimithandazo yemihla ngemihla kwaye ukuba ikulo lonke usapho ke kungcono kakhulu.
Thandaza imvana elambile ukuze ilawule, ilawule kwaye ibambe
Phumelela, phumelela, phumelela.
UYesu Kristu ungoyisi. Njengokuba le iyinyani, ndiyaphumelela ………. Intliziyo ......, ethobekile njengemvana yema ezinyaweni zam, xa uYesu Kristu esiya emnqamlezweni.
Lulama itakane legusha elisesibingelelweni, woyise iintshaba zam ezichasene nam; yanga intliziyo yam ingamila kuye, njengokuba noYesu Kristu wazalwa, wathumela oNgcwele ukufa Woyisile, njengokuba kufuneka ndiloyise olu tshaba lunobuqhophololo ……. Ngamaxesha amabini ndijonge kuwe, ngawathathu ndakubamba, ngegazi likaYesu Krestu intliziyo yam iyakuphula.
Ndibona utshaba lwam luvalwe amehlo kwaye iingalo zingenamsebenzi.
Igazi likaYesu Krestu lindibuza, andizukumnika. Ndiyakucela, Enkosi enkulu, ukuba undizise ku ……………., Ukuba uyizise kum, inikezele ezinyaweni zam, woyiswa kwaye udanile: unamandla ayoyisa.
Ukuba kukho into usathana zama ngokuchasene nam, ewe a Ubulungisa uyahamba, akazukuphumelela; ukuba ubeka abakhuseli, bonke baya kwala. UYesu Krestu, uya kuba nam njengemvana, kwaye xa ujonga ubukho bam bonke baya kufa isiqaqa.
Lo mthandazo umncinci wetakane ululamileyo, ulawule kwaye ubophe unamandla kakhulu!
Lo mthandazo mawenziwe ngoxanduva olupheleleyo kude kuthi neengcinga ezimbi kunye neemvakalelo zokuzingca.
Ukubuza ukukwazi ukulawula nokubopha umntu ayisi senzo sokuzingca kodwa luthando kuba amaxesha amaninzi izimvo zomnye umntu azicacanga kwaye kulapha ke ukuba lo mthandazo uba sisixhobo sethu kuphela esinamandla.
Ukongeza, isebenza kuphela kwisibini kodwa kuyo nayiphi na enye imeko apho kufuneka silawule khona ukuze izinto zingalawulwa.
Nangona kunjalo, eyona nto inamandla kuyo yonke okanye kuyo yonke eminye imithandazo lukholo elenzelwe lona, ​​akukho mthandazo wenziwayo ngokholo ongafumani mpendulo.
Ixhwane elithozamileyo elithozamileyo olifumana kwisibingelelo, ndincedise ekuphepheni nasekupheliseni zonke iintshaba ezinxamnye nam, eziqinisa entliziyweni yam kuye, njengoYesu Krestu othandekayo, njengomyalelo kuNgcwele uLazaro owoyisileyo, njengoko ndinqwenela Ndiloyisile utshaba lwam olwehlayo, ngalo mzuzu ungcwele ndikujongile, ndiyakubamba ndikubophe, Kwaye ngegazi elaphalazwa yiNkosi yethu uYesu Krestu, intliziyo yakhe yaphuka.
Bawo wam othandekayo, Nyana kunye noMoya oyiNgcwele, Wena ungoThixo oyinyaniso, vumela utshaba lwam ukuba luzithobe kum kwaye nangoku, kanye njengokuba unyana wakho othandekayo esiya emthini.
Ndibona utshaba lwam luyeza, Ngeengalo zalo buthathaka kwaye lugqithe amehlo, Kwaye ukuba uthe wandicela ngegazi lakho elonwabileyo, andisayi kuze ndimnike.
Ndicela inkosi yam enkulu ukuba uze kum, uguquke kwaye uzinikezele ezinyaweni zam, ulawulwe, woyise kwaye uthambise, ukuze umoyise ngamandla akho amakhulu.
Ukuba utshaba lwam luyeza luzama into ngakuye, ilawule inkosi yam kwaye ingamvumeli, ukuba ufuna ukundithatha ndiye kwelokulunga, mkhanyele nawuphi na umthetheleli onokuba naye. Othandekayo wam Yesu Kristu, njengemvana uya kuba kum, kuba xa utshaba lwam lubona ubukho bam, bonke ububi obunqwenela mna, babuyiselwa kuye.
Ukuba ufuna ukulawula iintshaba, lo ngumthandazo olungileyo wemvu.
Yonke into ebiba uxolo lwethu, olusikhathazayo, isenza siphelelwe lithemba okanye isenze sizive sinqabisekile ziimeko apho lo mthandazo unokusenza ukuba siphinde silawule iimvakalelo zethu noxolo lwangaphakathi.
Ukubetha ngaphezulu kweemeko ezinokuthi zivele kunye nabo bonke bazibhengeze njengotshaba lwethu kunokwenza umahluko omkhulu kwiziphumo z ezo meko.
Zingaba ziintshaba zethu okanye ilungu losapho.Omthandazo onamandla uya kusinceda ukugcina izinto ziseluxolweni thina nabo bonke.
Nokuba imeko iyintoni na.
Ngendlela efanayo, zonke ezo mpembelelo zimbi iintshaba zethu ziliphosela intiyo nengqumbo ziya kuhlala kude nendawo esihlala kuyo.
Ukucoca amakhaya ethu kunye namashishini kuyo nayiphi na impembelelo embi kubalulekile ukugcina ulawulo kwimisitho nezigqibo ezijikeleze iintshaba zethu.
Ukuba ufuna ukuzola kwaye ulawule umphathi wakho, Unokuthandaza nasiphi na isivakalisi esingasentla. Kuya kufuneka endaweni yegama lakho.
Abaphathi bethu ngamanye amaxesha banokwenza ubomi bethu bube nzima.
Kwiimeko ezininzi, ukushiya umsebenzi ayisiyonto ekufuneka ithathelwe ingqalelo kwaye kungamaxesha apho kucetyiswa ukwenza oku umthandazo ukulungiselela ukonakalisa umphathi wethu kwaye ke kunciphise uxinzelelo lomsebenzi.
Ezi meko zomsebenzi zivame ukuziva zisekhaya nakuyo yonke indawo esikuyo kwaye kubalulekile ukuba sizikhulule kwezi ntsholongwane zimbi ngaphambi kokuba zibangele nawuphi na umntu osondele.
Ukholo, uxanduva kwaye ngaphezulu kwazo zonke iinjongo ezilungileyo kufuneka zibe yinjini yethu ukwenza nawuphi na umthandazo kuba kuphela apho siya kufumana impendulo esiyifunayo.
Unako kwaye kufuneka uthandaze kuyo yonke imithandazo.
Into ebalulekileyo yile Umthandazo wemvu olulamileyo uthandaziwe unokholo oluninzi kunye nokholo oluninzi ngaphakathi entliziyweni yakhe.